क्यान्सर अस्पतालले अझै गरेन १ सय १ कर्मचारी पदपूर्ति – Saurahaonline.com
क्यान्सर अस्पतालले अझै गरेन १ सय १ कर्मचारी पदपूर्ति
चितवन, ०५ चतै । चितवनस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले विज्ञापन प्रकाशन गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
अस्पतालले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्तिका लागि २०७० माघ १३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । अस्पताललाई तत्कालिन समयमा १ सय १ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको ठहर गर्दै बिज्ञापन गरिएको थियो । अस्पतालले स्टाफ नर्स ६६ जना सहित ६ पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिले ‘आफन्त’लाई करारमा जागीर दिइरहनका लागि स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेका हुन् । ‘अस्पतालमा अधिकांश जनशक्ति दक्षता र क्षमता भन्दा पनि चिनजानको भरमा करारमा नियुक्ति हुन्छन्,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने, ‘आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न करार सजिलो उपाय भएकाले स्थायी कर्मचारी नियुक्तिममा आलटाल गरिएको हो ।’
अस्पतालमा लामो समयदेखि पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रभावित हुन पुगेको छ । राजनीतिक भागबण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाहको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । अस्पतालमा सेवा लिन आएका बिरामीलाई बिभिन्न बहानामा नीजि अस्पताल पुर्याउन गिरोह नै सक्रिय छ ।
यस अस्पतालका अधिकांश डाक्टरले आफ्नै नीजि अस्पताल समेत सञ्चालन गरेका छन् । बिरामीलाई ति डाक्टरहरुले ‘मृत्यूको डर’ देखाएर आफ्नो क्लिनिक तथा अस्पतालमा पुर्याउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अस्पतालमा दुई वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।
कमिशनको चक्करमा क्यान्सर जस्तो संवेदनशिल परीक्षणमा ‘म्याद नाघेका रिएजेण्ट तथा किट’ प्रयोग हुने गरेका पाइएको थियो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज न्यौपानेले बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा पदपूर्तिमा समस्या आएको बताए । ‘जनशक्तिको अभाव छ, छिट्टै पदपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने ।
क्यान्सरका धेरै विरामी रोग अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल पुग्ने गरेको अस्पतालमा आधारित राष्टिय क्यान्सर तथ्याङ्गकले देखाएको छ । विरामीको तुलनामा पुरानै संचरना हुदां स्रोत साधन अभावले उल्लेख सेवा दिन नसकेको चिकित्सकहरु बताउछन् ।
गएको १० वर्षमा क्यान्सरको उपचारका निम्ति अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या १९ गुणाभन्दा धेरै बढेको अस्पतालका आँकडाहरुले देखाएको छ ।
चितवन भरतपुरमा रहेको क्यान्सर अस्पतालका डा. कृष्णसागर शर्माले सन् २००३ मा यहां उपचार गर्न आएका १ हजार ८ सय ६९ रहेको दश पछि सन् २०१२ मा आउदा बढेर २७ हजार १ सय ७४ जना बताउदै यो हेर्दा नेपालमा पनि क्यान्सरका विरामीहरुको संख्या निकै बढेको बताउछन् । उनका अनुसनर बच्चामा देखिने कयान्सरका विरामीहरु समेत उपचार गर्न समयमै आउने गरेको बताए ।